Abrahama (patriarka) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Abrahama)
I Abrahama dia ilay lehilahy heverina fa nipoiran'ireo fivavahana telo mino Andriamanitra tokana (monoteista) dia ny fivavahana jiosy sy ny fivavahana kristiana ary ny fivavahana silamo.
Araka ny Baiboly, noho ny haben'ny finoany no nilazan' Andriamanitra aminy fa izy dia hanan-taranaka maro sady nampanantenainy tany mahavokatra ho an'ireo taranany ireo, dia ny tany Kanaana. Taranak'i Sema zanak'i Noa (na Nôe) izy. I Tera no anaran-drainy ary i Ismaela sy i Isaaka, izay niteraka an'i Esao sy i Jakoba, sy ny hafa koa no zananilahy. Izy no razamben'ny Ismaelita (taranak'i Ismaela) sy ny Edomita (taranak'i Esao) ary ny Israelita (taranak'i Jakoba). Samy miresaka ny momba azy na ny Baiboly na ny Kor'any na ny boky masina hafan'ireo fivavahana abrahamika. Nanambady an'i Saraha sy i Ketora izy sady niteraka amin'i Hagara, araka ny Baiboly.
Atao hoe אַבְרָהָם / Avra'ham izy amin'ny teny hebreo, fa إبراهيم / Ibrahim amin'ny teny arabo ary አብርሃም / Abraham amin'ny teny gezy. Ao amin'ny Bokin'ny Genesisy dia Abrama (izay midika hoe "Rain'ny mino") no anarany fa taty aoriana no nanaovana azy hoe Abrahama izay midika hoe "Rain'ny firenena maro"). Atao hoe Ibrahima (arabo: Ibrahim) izy ao amin'ny boky Kor'any.
Izy no olona resahina be indrindra ao amin'ny Bokin'ny Genesisy. Isan'ireo patriarka voalohany ao amin'ny Baiboly izy. Izy no niandohan' ny fivavahana amin'andriamanitra tokana amin'izao fotoana izao, razamben'ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo.
Misy andalana roa ao amin'ny Baiboly izay milaza an'i Abrahama ho nalevina ao Hebrona (Gen 23.16-18; Gen 25. 9-10) .
I Tera no rainy. Ny vadiny dia i Saraha sy i Hagara. Ny zanany dia i Ismaela sy i Isaka. Ny rahalahiny dia Nahora.
I Ismaela sy i Hagara reniny tany an'efitra, nataon'i Navez (1820)
Ny fanaovan-tsorona an'i Isaka, nataon'i Domenichino (1627-1628)
Ao amin'i Freebase:  Archived Jolay 26, 2014 at the Wayback Machine
↑ Ary ny anaranao tsy hatao hoe Abrama intsony, fa hatao hoe Abrahama, satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. (Gen. 17.5, Ny Baiboly)
↑ 16 Dia neken'i Abrahama ny tenin'i Efrona, ka nolanjainy ho azy ny vola izay efa voalazany teo anatrehan'ny taranak'i Heta, dia sekely volafotsy efa-jato lanin'ny mpivarotra. 17 Ary ny sahan'i Efrona, ilay teo Makpela, izay tandrifin'i Mamre, dia ny saha sy ny zohy izay teo anatiny mbamin'ny hazo rehetra izay teo anatiny, izay teo amin'ny sisiny rehetra manodidina, dia natao varo-maty 18 tamini'i Abrahama ho fananana, teo imason'ny taranak'i Heta, dia izay rehetra niditra teo am­bavahadin'ny tanànany. (Gen. 23.16-18, Ny Baiboly)
↑ 9 Ary nalevin'Isaka sy Isimaela zanany izy tao amin'ny zohy ao Makpela, tao amin'ny sahan'i Efrona, zanak'i Zohara Hetita, izay tandrifin'i Mamre, 10 dia ilay saha izay novinidin'i Abrahama tamin'ny taranak'i Heta; tao no nandevenana an'i Abrahama sy Saraha vadiny. (Gen. 25.9-19, Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Abrahama_(patriarka)&oldid=1014664"
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 13:08
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 13:08 ity pejy ity.